“Kulanka Tottenham Hotspur waa imtixaankeyga ugu horeeyay” – Tababare Solskjær – Gool FM
(Manchester) 06 Jan 2019. Macalinka ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa ka hadlay kulanka horyaalka Premier League, kaasoo Axada soo aadan Red Devils kula ciyaari doonto Tottenham Hotspur.
Tababare Solskjær ayaa dhinaca kale sheegay in kulankan uu noqon doono imtixaankiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu la wareegay mas’uuliyada shaqada tababarka ee kooxda Manchester United.
“Waxaan eeganeynaa kulamadan oo kale, sababtoo ah waxay ii cadeeneysaa halka aan ka joogno kooxaha waaweyn”
“Anaga kuma faraxsani booska afaraad, shanaad ama lixaad, ee waxaan u baahanahay inaan helno booska ugu sareeya ee loogu guuleysan karo horyaalka Premier League”.
Intaas kadib macalinka ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa waxaa wax laga weydiiyay wax qabadkiisa kooxda Red Devils wuxuuna yiri:
“Waxaad aaday Cardiff, kaasoo ahaa kulankeygii ugu horeeyay, kadib waxaad kula ciyaartay garoonkaada Bournemouth iyo sidoo kale Harefield United, kulamadan ma ahan kuwo sahlan, sababtoo ah kulamadan ayaan ku soo hor luminay dhibco hada kahor”.
“Horyaalka Premier League ma jiraan kulamo sahlan, waxaan u maleynayaa in kulankii Newcastle United aan soo bandhignay qaab ciyaareed cajiib ah”.
Arsenal oo Bishan Janaayo dooneysa in Aaron Ramsey ay Juventus uga soo badelato Laacibkan...